Chelsea oo Rabto in Jorginho ay ku bedelato Cristian Erikson.
Home Horyaalka Ingiriiska Chelsea oo Rabto in Jorginho ay ku bedelato Cristian Erikson.
Chelsea ayaa soo jeedineysa heshiiska isdhaafsiga ah eeJorginho iyo Eriksen sida shaaca laga qaaday thomas Tuchel ayaa la dhacsaneen qaab ciyaareedka xidiga xidiga u dhashay talyaaniga isagoo Erikson u arka mid ku haboon shaxdiisa sida laga xigtay Calcio mercato web.
Blues ayaa dooneysa inay la soo saxiixato xiddigga Inter Chelsea ayaa soo jeedineysa heshiis isku beddelasho ah oo ay ku lug leeyihiin Jorginho iyo Christian Eriksen oo ay la galeen Inter suuqa kala iibsiga xagaaga.
Kooxda Blues ayaa dalban doonta lacag dhan 20 milyan oo euro (£ 18m / $ 24m) si ay u soo gabagabeeyaan heshiiska, iyadoo Nerazzurri uu u furan yahay iibinta qadka dhexe ee deenishka dhamaadka xilli ciyaareedka.
Jorginho wuxuu aadi doonaa San Siro hadii labada naadi ay gaaraan heshiis kama dambeys ah, laakiin wadahadalada ayaa wali ah kuwo aad uga dhow marxaladihii hore.
Previous articleArsenal oo ku guuldareysatay habkii ay kusoo qaadan leheed Riqui Puig.
Next articleModric wuxuu sameynayaa lacag dhimis si uu ugu sii nagaado Real Madrid.